I-Internet Ministries - Icawa kaKristu
"Kuba ndiyazi izicwangciso endinayo," kutsho iNkosi.
UYeremiya 29: 11 Funda Okuninzi
Ukuvuna kunene Khuthazwa ukuba iNkosi ikubizela enkonzweni yakhe.
Mamela enye yeentshumayelo zethu
Funda i Bha yibhile ngokusebenzisa iikholeji zethu zeeBhayibhile
Yintoni endimele ndiyenze ukuze ndisindiswe?
The iicawa zikaKristu
Ziziphi iicawa zikaKristu kwaye zikholelwa ntoni?
Asiyikho inkolo kwaye asinayo ikomkhulu eliphakathi okanye umongameli. Intloko yecawa ayikho enye ngaphandle kukaYesu Kristu (Efese 1: 22-23).
Ibandla ngalinye lecawa likaKristu lizimela, kwaye liLizwi likaThixo elidibanisa kwiNyelelo Elinye (i-Efese 4: 3-6). Silandela iimfundiso zikaYesu Kristu kunye nabapostile bakhe abangcwele, kungekhona imfundiso yabantu. SingamaKristu kuphela!
A Umyalezo weThemba kunye noXinzelelo
Ungu Khangela entsha yintsapho ukufunda nokunqula kunye? Siyakuthanda ukwazi okungakumbi malunga nawe nentsapho yakho. Iicawa zikaKristu ziyakwamkela.
Ndikhangela i yethu yakutshanje ntshumayelo? Mamela okanye khuphela ikopi namhlanje. Finyelela kwethu ntshumayelo ukuva kwiqela labashumayeli emhlabeni wonke.
Dibana nathi ngeCawa ukuze unqule! Si amawaka amabandla emhlabeni jikelele ukulungeleka kwakho. Ukutyelela iinkcukacha zethu kwi-intanethi ukufumana icawa kufuphi nawe.
funda NgeCawa Yethu
Sithetha apho iBhayibhile ithetha khona, kwaye sithula apho iBhayibhile ingathuli. Asiyikho inkolo kwaye asinayo ikomkhulu eliphakathi okanye umongameli.
Funda ngakumbi malunga iicawa zikaKristu
Intloko yecawa ayikho enye ngaphandle kukaYesu Kristu ngokwakhe (Efese 1: 22-23).
xa usityelela Umthandazo: Ngexesha leenkonzo zonqulo amadoda amaninzi aya kubakhokela ebandleni kwimithandazo yomphakathi.
We kunqula uThixo ngomoya nangenyaniso
Ukucula: Siza kucula iingoma ezininzi kunye neengoma kunye, zikhokelwa ngumbhali omnye okanye ngaphezulu. Ezi ziya kuhlaziywa i-capella (ngaphandle kokuhambelana kwezixhobo zomculo).
IsiSidlo seNkosi: Sidla iSidlo seNkosi nganye ngeCawa, silandela iphethini yecawa yokuqala yenkulungwane.
Ngeziqithi ezingaphezu kwe-7,000 kunye noluntu olukhulayo lwezigidi ze-104, iPhilippines luhlanga oluphambili kunye nesango eliqhinga laseAsia.
Fumana indlela Ukubandakanya
Abaninzi basePhilippines basebenza eChina, ezinye iintlanga zaseAsia, nakumazwe asempuma, apho zikhona izikhundla eziphambili. Inxaxheba ephambili kunye nexesha loMdlali weSolar.
Icawa yeNkosi iye yahlala ePhilippines iminyaka emininzi ngenxa yemigudu yangaphambili yangaphambili kunye nekhoyo. Namhlanje kukho amabandla anqikelelweyo e-800.
Iicawa zikaKristu ziyakwamkela ukuba unqule iNkosi kunye nathi. Silapha ukukhonza uThixo nokukunceda ekuhambeni kwakho kunye neNkosi. Ukutyelela icawa kaKristu kwindawo yakho. Kuhlala kukuvuyisa ukukhonza intsapho kaThixo. Ukuba sinakho nayiphi na inkonzo kuwe nceda ungathandabuzeki ukubiza okanye ukubhala.
Funda ngakumbi malunga nathi
"Icawa kaKristu yinto kanye kunye nosapho lwam kwaye sasifuna kwaye sifuna. Siyabulela kwi-Internet Ministries ngokukwabelana ngeendaba ezilungileyo zikaKristu nathi. UThixo ulungile! "
yethu U msebenzi we-Intanethi
USilbano Garcia, II. Mvangeli
USilbano Garcia, II. Ukhonza njengomvangeli kumabandla kaKristu, kwaye nguye umsekeli we-Internet Ministries. UMfoweth 'uGarcia wenze umsebenzi wezithunywa zevangeli kwiiCalifornia, eColorado, eFlorida, eIdaho, eIowa, eNew York naseTexas. Uye washumayela kwiintlanganiso zevangeli kwihlabathi lonke. Ngomhla we-Meyi 1, i-1995 waba negalelo ekuhambiseni isango lokuqala le-intanethi kwiicawa zikaKristu emhlabeni jikelele kwi-www.Church-of-Christ.org. Le ntsebenziswano ye-intanethi iyaqhubeka isebenza njenge-hub kwi-Intanethi yeeCawa zehlabathi lonke.
UMzalwan 'uGarcia ubizwa ngokuba ngumvangeli we-intanethi kunye noovulindlela kwintsimi yeVangeli. Uye waba negalelo ekuncediseni amakhulu amabandla ekusebenziseni i-Intanethi njengesithuthi sokusasazeka kweVangeli likaYesu Kristu. Imizamo yakhe ye-intanethi iye yaphawulwa ngamaqela amakhulu amakhulu aquka ihlabathi lehlabathi.
Funda ngakumbi malunga nee-Ministries ze-intanethi